RW Rooble: Waxaan diyaar u ahay inaan qanciyo musharraxiinta | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble: Waxaan diyaar u ahay inaan qanciyo musharraxiinta
Rooble ayaa sheegay in uu qanciyo Mucaaradka, laakiin Muharraxiinta ayaa kaliya ku qanca wax ka bedalka guddiga doorashada heer Federaal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu diyaar u yahay qancinta musharraxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha, kuwaasi oo qaarkood sheegay in aysan ku qanacsaneen guddiga doorashada heer Federaal.
Waxa uu sheegay Rooble in uu aamisan yahay isaga xubnaha guddigaasi iney yihiin kuwo karti leh oo wax ka qaban kara marxaladda doorashada.
Cid walbo oo ka mid ah musharraxinta shirsan ayuu sheegay inuu diyaar yahay fahamsiinta micnaha xubnahan iyo sida ay shaqada u qaban karaan. Rooble ayaan laakiin wali jawaab ka bixin eedeeynta mucaaradka.
"Waxaa jira rag walalahey ah oo si fiican u garanayo oo musharraxiin ah, waxaan diyaar u ahay inaan si fiican u fahamsiiyo guddiyadan, aana tuso in ay yihiin kuwo micno leh oo dalka ka gudbinaya doorashada una gudbinaya Afarta sano ee soo socota"
Inta badan musharraxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ee doorashada 2020/21 ayaa walwal ka qaba guddiga doorashada heer Federaal, waxaana ka mid ah guddigan Saraakiil NISA ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan shaqaalaha rayida.